G toN see ịhụ na Jaca, obodo akụkọ ihe mere eme na nnukwu obodo | Akụkọ Njem
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga mpaghara Huesca, ị nwere ike ịnọ na-eche ihe ị ga-ahụ na Jaca, nke dị na mgbago ugwu nke obodo Aragonese, nke dị nso na Pyrenees ma juputa n'akụkọ ihe mere eme. N'ezie, ọ bụ isi obodo nke County nke Aragon ma o biri ebube-ya nke-uku n’etiti ndi oge ochie. N'ime ihe ndị a niile, e nweela ọtụtụ ihe ncheta ị nwere ike ịga taa.
Mana ọ bụghị naanị na ị nwere ụlọ akụkọ ihe mere eme iji hụ na Jaca. Ọ bụkwa ebe kachasị mma maka ịme njem na ịgba ọsọ na ugwu na ebe ntụrụndụ nke Pyrenees. Otu ọmarịcha gastronomy mezuru onyinye ndị njem nleta nke obodo Jacetan. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ya, anyị na-akpọ gị oku ka ị soro anyị.
1 Ihe ị ga-ahụ na Jaca, obodo mepere emepe
1.1 Katidral San Pedro
1.2 Clọ elu, ihe izizi ịhụ na Jaca
1.3 Ike Rapitan
1.4 ụlọ elu elekere
1.5 Ebe obibi ndị mọnk nke San Juan de la Peña
1.6 Ihe ncheta ndị ọzọ iji hụ na Jaca
3 Kedu mgbe ọ ka mma ileta Jaca
4 Otu esi aga Jaca
Ihe ị ga-ahụ na Jaca, obodo mepere emepe
Ma obodo n’onwe ya ma gburugburu ya nwere ihe nketa okpukpe na nke obodo nke ndi uka guzobere nke ndi Romanesque nwere obi uto, ebe obibi ndi mọnk, ulo elu, ebe ewusiri ike na obuna n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ka anyị leta ya.
Katidral San Pedro
E wuru na narị afọ nke XNUMX site n'usoro nke Sancho ramirez, A na-atụle Eze nke Aragon akpa romanesque wuru na Spain. N'ezie, ya ewu nwere njikọ chiri anya na Santizọ Santiago, nke na-agafe na Jaca.
O nwere atụmatụ basilica, nke nwere ogologo ahịhịa atọ na-ejedebe n'ọtụtụ ọnya nke semicircular, ụzọ mbata abụọ nwere ogidi na isi, yana ezigbo dome. Dị ka ịmata ihe, n’etiti ihe osise ndị a pịrị ọnụ ụzọ, e nwere nke pụrụ nnọọ iche. N'akụkụ ị nwere ike ịhụ jaquise mkpanaka, ihe e jiri mee ihe na Middle Ages na nke ruru 77 centimeters.
N'aka nke ọzọ, n'ime katidral ị nwere ike ịga leta ya Diocesan Museum, ebe ị ga-ahụ ihe osise ndị Romanesque bara oke uru dị na ụka dị iche iche na mpaghara Huesca.
Clọ elu, ihe izizi ịhụ na Jaca
Akpọkwara nnukwu ụlọ nke san pedroE wuru ya na narị afọ nke XNUMX dị ka ntọala nchebe maka obodo ahụ. Ọ bụ ntọala nke usoro nchebe nke ókèala nke ejiri ụlọ elu mechie dịka Ansó, Santa Helena na Hecho.
N'ime nnukwu ihe owuwu nke nwere ogige dị n'etiti ebe a na-ekesa ndị dabere na ụlọ nkwakọba ihe dị iche iche, ogige, ọfịs na ụlọ ụka. N'ime otu n'ime ha, ị nwekwara ike ịga leta ọchịchọ ịmata ihe Lọ ihe nkiri nke Obere agha.
Ewubere na narị afọ nke XNUMX, ọ nwekwara ọrụ nchebe. Ọ na-achịkwa panorama ahụ site na ugwu nke otu aha ahụ, nke karịrị mita XNUMX. Bụ a nnukwu ebe e wusiri ike nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku mita iri atọ na puku isii na, n'ụzọ dị ịtụnanya, nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndọtị n'okpuruala dị ka n'elu.
ụlọ elu elekere
A makwaara dị ka n'ụlọ mkpọrọ N'ihi na ọ na-eje ozi maka ọrụ a, ọ bụ ihe atụ nke obodo Gothic, nke nwere akụkụ akụkụ anọ yana ọnụ ụzọ n'okpuru arch.
Ebe obibi ndị mọnk nke San Juan de la Peña
Kpuchie ya nnukwu nkume nke ugwu Pano, ahụwo akụkọ ihe mere eme mpaghara mpaghara kemgbe narị afọ nke iri: e liri ndị eze mbụ nke Aragon n'ebe ahụ. Ebe ndị ọzọ na ị ga-eleta ebe obibi ndị mọnk bụ Romanesque mputa cloister, na ụlọ akwụkwọ gothic nke San Victorián na mgbe e mesịrị Royal Pantheon, neoclassical ịke.
Ihe ncheta ndị ọzọ iji hụ na Jaca
Ma obodo nketa, ị nwekwara ike ịhụ na Jaca ụlọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na ụdị Plateresque; ihe eze ukwu, nke XVII na Akwa San Miguel, otu n’ime mmadụ ole na ole site n’oge ochie nke echekwara n’ebe ugwu nke Aragon.
Ma ihe kasị adọrọ mmasị obodo ewu na mpaghara bụ Fgbọ okporo ígwè Canfranc, nke mepere na 1928 ma bụrụ n'oge nke abụọ kachasị mkpa na Europe mgbe Leipzig gasịrị. Ọ bụ akụkụ nke oké ọchịchọ oru ngo nke Ọwara Somport, bụ́ nke na-agwa Spain na France okwu.
Banyere ije ụlọ, ị nwekwara ike ịhụ na Jaca na gburugburu ya ụka ndị ọzọ dịka ndị San Adrián de Sasabe, Santa María de Iguácel ma ọ bụ San Caprasio. Ha niile mejuputara ihe nketa di ebube nke ndi Rome.
Ozugbo anyị nyochara ihe ị ga-ahụ na Jaca, anyị ga-agbanye batrị anyị site na ịnụ ụtọ gastronomy ya. Nke a na - anabata ọnọdụ ihu igwe nke mpaghara ahụ, yana ogologo oge oyi na oyi, ọ bụ ya mere o ji enwe ọdịnaya calorie dị elu. Ha na-azakwa ọdịbendị ọrụ ugbo na ọrụ ugbo nke mpaghara ahụ.
Ọ bụ ahụkarị ndị nwa Atụrụ ma ọ bụ nwa atụrụ a mụrụ n’ọkụ. Kpamkpam maka ihe obi uto nke a, the chiretas, nke jupụtara viscera na osikapa nke anụmanụ. N'etiti anụ, ị nwekwara ike ịnwale anụ ezi anụ a l'Alforcha na stewed ọhịa boar na ukpa ihendori.
Banyere azụ, na Bacalao Al Ajoarriero, nke a kwadebere ya na galik, yabasị, poteto, ose na grated tomato. Ike dị ike bụ crumbs na akwa, nke nwere loganiza ma ọ bụ chorizo, galik, mmanụ na yabasị.
N'ikpeazụ, gbasara ihe eji megharịa ọnụ, achịcha achịcha Jaca ama ama. N'etiti ngwaahịa ya, ị nwere ike ịnwale agbụ, nke ejiri akwa, mmiri ara ehi, sugar, flour na anise mee; ihe jaques na obere okpueze Santa Orosia.
Kedu mgbe ọ ka mma ileta Jaca
Anyị ekwuola na ihu igwe dị na Jaca bụ oyi, na-enwe okpomọkụ kwa afọ na-erughị ogo iri. Otú ọ dị, ọ bụ ihu igwe nke ụdị continental ya mere enwere odi iche di uku n ’etiti oyi na udu mmiri.
Na nke mbụ, ịnwere ike ịchọta okpomọkụ nke ogo ise dị n'okpuru efu, ebe n'oge nke abụọ ha nwere ike ịgafe iri atọ karịa efu. Ke adianade do, ma n'oge oyi ma na mmiri na ụbịa mmiri na-ezo karịa na ọbụna snow dị ukwuu na oyi na-atụ ọnwa. Ya mere, oge kachasị mma iji gaa Jaca bụ ndaeyo.
Otu esi aga Jaca
Anyị agwala gị ihe ị ga-ahụ na Jaca na kwa ihe ị ga-eri. Ma ọ dịkwa mkpa ka ị mara ka ị ga-esi ruo ebe ahụ. Nwere ike ime ya maka ụgbọ okporo ígwè,, ebe ọ bụ na e nwere akara nke jikọtara obodo ahụ na Zaragoza. N'otu aka ahụ, enwere ụgbọ ala nke na-ekwusara ya na isi obodo Aragon na mpaghara ndị ọzọ nke Spain.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ụgbọ ala nke aka gị, site na ọwụwa anyanwụ ị ga-erute site na N-260 ma site n'Ọdida-anyanwu n'akuku N-240. N'aka nke ọzọ, site na ndịda ma site n'ebe ugwu, ụzọ bụ E-7.
Na mmechi, enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na Jaca: ihe nketa dị oke ọnụ na nke dị oke ọnụ na oke ala, na-echefughị ​​gastronomy ya dị ụtọ. Do na-amaja ịma obodo Aragon?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ihe ị ga-ahụ na Jaca
Njem na Cuba